Truth be known: ဖတ်မိတာလေးတွေ (အဆက်)
Posted by generation96 at 12:41 PM
Hote pa byar. I see the histroy in that way too.
စနေ တနင်္ဂနွေက ပန်းကန်ဆေးနေရလို့ အခုမှဖတ်ရတယ်။ ဗဟုသုတရတယ်အစ်ကိုရေ...
အေးဗျာ… ယိုးဒယားတွေ ဆင်ဖြူမိလို့ ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့နော်။
အင်း…ဗမာတွေလည်း ဒုက္ခရောက်တဲ့ အထဲ ပါတာပါပဲဗျာ။ စစ်နိုင်ပေမယ့် သေလိုက်ကြတာ သောက်သောက်လည်း။ ဒီ ဘာမဟုတ်တဲ့ မျိုးဗီဇ ဖောက်ပြန်နေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ် မမည်းပဲ ဖြူနေတဲ့ ဆင်တွေအတွက် လူတွေ သေပေးရတာ အဓိပ္ပာယ်ကို မရှိဘူး။ ကျနော့် အတွေးပါ။ သူများတွေတော့ ဘယ်လိုမြင်မယ်မသိဘူး။